သာလွန်ဇောင်းထက်| January 14, 2013 | Hits:7,537
| | သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက် ရေဒီယို မိန့်ခွန်း ပြောနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်)
သမ္မတအကြံပေးနှင့် တောင်သူများ၏ မြေယာပြဿနာ မနက်ဖြန်ကြားနာမည်သမ္မတလုပ်ရတဲ့ ဒုက္ခဦးရွှေမန်း ဘာကြောင့် ကာလုံ အစည်းအဝေး ခေါ်တာလဲဦးရွှေမန်းလည်း သမ္မတ ဖြစ်ချင်လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်က ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိသင့်သေးသည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြော
Chinlay January 14, 2013 - 8:25 pm He isapresident who does not have president power.
Reply Full Moon January 15, 2013 - 11:41 am In Burma, chairman is still above president. Than Shwe is chairman and Min Aung Hlaing is vice. Thein Sein is just appointed clerk.
Reply Lailun January 15, 2013 - 3:16 am Sweet. Checks and Balances must alive well. It is important.
Reply ဌေးဝင်း January 15, 2013 - 6:51 am သမတကြီး၇ယ်…ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်သင့်ပါတယ်…သမတကြီးက…ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်မှမသ်သေးဘဲကိုး
Reply မောင်လဆိုင်း January 15, 2013 - 9:44 am သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ သမ္မတရှုံးသင့်ပါတယ်။
Reply moeaung January 15, 2013 - 11:50 pm လွှတ်တော်သည် တဖြေးဖြေး နှင့် အာဏာကြီးထွားအောင် လုပ်ဆောင်နေသည့်သဘောဖြစ် ပါသည်။ ညွှန်ချုပ်အဆင့် လစာ ၂၅၀၀၀၀ ရသည့်အချိန်တွင် လစာ ၃၀၀၀၀၀ ရသည်ကို အားမရ၊ ၀န်ထမ်းများကိုယ်လစာနှင့်ထမင်းစားနေရသည့်အချိန်တွင် ထမင်းဘိုး တစ်နေ့ ၁၀၀၀၀ ရသည်ကို မရောင့်ရဲနိုင်၊ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးကို ဦးထိပ်မထား၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်သတ်မှတ်ရေးကို ဦးထိပ်ထားနေပါသည်၊ နိုင်ငံအတွက် ပြည်သူ့အတွက် ဘယ်လောက် လုပ်ပြီးပြီလဲ သုတေသနလုပ်ဘို့လိုနေပါသည်။